Ikhadi le-IC elinikezela ngenkqubo yokuthengisa yombane
ngu admin nge-20-06-02
Icandelo 1: Inkqubo ngokubanzi 1.Background Inkqubo yempahla yenkqubo enkulu yolawulo. Ulawulo lokusetyenziswa kombane kumashishini, iindawo zokuhlala nezindlu kubalulekile kuyo. Ukubiwa kombane, umbane ovuzayo, kunye nokulayisha ombane kumashishini, iindawo zokuhlala, ...
Amathemba okamva kwiimitha zombane ohlawulelwa kwangaphambili
Ngophuhliso loluntu olukhawulezileyo, imveliso ebizwa ngokuba yimitha yombane ohlawulelwayo sele ifunyenwe, engagcini nje ngokuphumeza iintlawulo zombane zabasebenzisi kwezinye iingingqi, kodwa ikwabonelela ngokulula kwinkqubo yamandla kwaye kwangaxeshanye ngcono ukukhusela umbane. Ke, yintoni ...
ukubeka iliso kusetyenziso “lwendlu”
Ngoku iinkampani zizama iindlela ezahlukeneyo zokwandisa amandla abo kunye nokunciphisa iindleko zokuvelisa. Umzekelo, ulawulo lwamandla endabuko lusebenzisa iindlela zesandla ukukopa kunye nokusombulula, ezineengxaki ezifana nokungaguquguquki okungagungqiyo, ixesha elisezantsi, kunye nobunzima kulawulo. Lingayenza njani ixesha lenene ...